राधिका अधिकारी, Author at Shikshapatra
‘छक्कापञ्जा’ टिममै मुन्द्रे
कलाकार जितु नेपालले सञ्चालन गर्दै आएको कमेडी शो ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’को दोस्रो सिजनको अध्यक्षबाट दीपाश्री निरौलालाई हटाइएकाले नेपाललाई पनि ‘छक्का पञ्जा’ टीमबाट ‘किक हानिएको’ अड्कलबाजी भइरहेको छ ।
गीत गाउन के गर्नुपर्छ ? साधना के हो ? सिकाइ के हो ? उनलाई केही थाहा थिएन । मात्रै मनमा हुटहुटी थियो, गीत गाउने, ठूलो स्टार बन्ने । गायन क्षेत्रका कसैलाई चिनेका थिएनन् ।
फूलवालीलाई घोच्ने काँडाजस्तो प्रश्न
‘रजस्वला नभएको भए न राम हुन्थे, न म हुन्थेँ। त्यसैले रजस्वला भएकी महिलालाई हेय भावले हेरिनु हुँदैन। संस्कार, चलन, र बुझाइ ठाउँअनुसार फरक छन्। पुस्तान्तरण हुँदै जाँदा परिवर्तन हुँदै गएका पनि छन्।
होहल्ला छैन, हलमा
दशैंमा खुल्न नसकेका चलचित्र हलहरु तिहारसम्म खुल्ने आशा। राज्यलाई चलचित्र क्षेत्र नभए पनि मान्छे बाँच्छ भन्ने लाग्छ । तर हामीले ३२ देखि ३४ हजार प्रत्यक्ष श्रमजीविह र उनीहरुसँग आश्रितका लागि चलचित्र क्षेत्र खोलिदिनुस् भनेर आग्रह गरेका छौँ ।
देश सम्झाउँछ परदेशको दशैँले
कार्की धेरै कुरा सम्झन्छन् । तर, सम्झना सुनाउँन चाहदैनन् । उनलाई डर लाग्छ ‘परदेशमा बसेर खोक्रो राष्ट्रियता देखाउनु बेकार छ’ भन्नेहरुसँग । उनी मन अमिलो पार्दै भन्छन्, ‘हाम्रा छोराछोरीको भविष्य देशमै सुनिश्चित हुन्थ्यो भने किन देश छाड्नु पर्थ्यो र ?’